Sarimihetsika sarimihetsika goosebumps vaovao dia miarahaba anao amin'ny Monster Mash - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Sarimihetsika sarimihetsika goosebumps vaovao dia miarahaba anao amin'ny Monster Mash
Sarimihetsika sarimihetsika goosebumps vaovao dia miarahaba anao amin'ny Monster Mash
by Admin Jona 9, 2015
nosoratan'i Admin Jona 9, 2015
Somary mahagaga ihany raha mbola tsy nahita tranofiara tokana izahay amin'ny ho avy Goosebumps sarimihetsika, raha jerena fa efa-bolana eo ho eo miala ny famotsorana isika. Saingy manana zavatra hampiasana anao izahay anio, ary heverinay fa handavaka azy ianao.
Raha tokony hampifanitsy ny iray na vitsivitsy amin'ireo tantara malaza izay nosoratan'i RL Stine tamin'ny taona 1990, Goosebumps dia ho lasa biby goavambe mahatalanjona mahatalanjona, satria 30 amin'ireo biby goavam-be tian'i Stine indrindra no ho avy hiatrika ilay sarimihetsika sinema. Eny, telopolo!
Ao amin'ny sarimihetsika tarihin'i Rob Letterman, kintana Jack Black amin'ny maha RL Stine azy, ilay tantara miompana amin'ireo biby goavambe isan-karazany avy amin'ireo boky navoaka tamin'ny tontolo tena izy. Miankina amin'i Stine sy zatovo roa ny hamerina ireo monstera ao anaty boky, alohan'ny tara loatra.
Androany dia voky tanteraka isika Goosebumps galeria sary ho anao, ary mirakitra sary ny saika isaky ny biby goavambe izay hasongadina ao amin'ny sarimihetsika. Saribakoly mahatsiravina, sarontava mahatsiravina izay tsy hivoaka ary biby goavambe voatavo goavambe dia vitsivitsy monja amin'ireo zavaboary, ary nahatsapa izahay fa nihaona tamin'izy ireo rehetra teo aloha.
Zahao ny sary rehetra etsy ambany ary tadiavo ireo Goosebumps sarimihetsika amin'ny 16 Oktobra!
In Goosebumps, tezitra amin'ny fifindrana avy amin'ny tanàna lehibe mankamin'ny tanàna kely iray, Zach Cooper (Dylan Minnette) zatovo dia nahita firakofana volafotsy rehefa nihaona tamin'ilay zazavavy tsara tarehy, Hana (Odeya Rush), mipetraka eo akaikin'ny varavarana ihany izy. Saingy ny rahona volafotsy rehetra dia misy rahona, ary i Zach dia tonga rehefa fantany fa i Hana dia manana dadany tsy fantatra izay nambara ho RL Stine (Jack Black), mpanoratra ny andiany Goosebumps be mpitia indrindra.
Hay nisy antony hafa nahatonga an'i Stine hafahafa… gadra nofinofisiny izy - tena misy ireo biby goavam-be nampalaza ny bokiny, ary i Stine dia miaro ireo mpamaky azy amin'ny fihazonana azy ireo hiditra ao amin'ny bokin'izy ireo. Rehefa namoaka ireo biby goavam-be tsy nahy i Zach tamin'ny sora-tanany ary nanomboka nampihorohoro ny tanàna izy ireo, tampoka teo dia i Stine, Zach, ary i Hana no namerina azy rehetra tao amin'ireo boky nisy azy ireo.
Navoaka ny horonantsary DVD & Blu-ray Horror vaovao: 9 Jona 2015
Sarimihetsika mampihoron-koditra mihoapolo 10 mahery ao amin'ny Netflix: Avereno atao an-tsaina ireo tantara taloha